Musharax Cali Xaaji Warsame oo si wayn loogu soo dhoweeyey Garoowe (Dhegeyso+sawirro) – Radio Daljir
Musharax Cali Xaaji Warsame oo si wayn loogu soo dhoweeyey Garoowe (Dhegeyso+sawirro)
Nofeembar 30, 2013 3:46 b 0
Garoowe, November 30, 2013 – Boqolaal dadweyne ah ayaa magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, waxay si diiran ugu soo dhoweeyey musharax Cali Xaaji Warsame oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland.
Banaanka magaalada ayaa dadweyne wata gaadiid fara badan, waxay ku soo dhoweeyeen musharaxa u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland Cali Xaaji, qaybaha bulshada oo idil ayaa ka qayb qaatay soo dhowaynta musharaxa.
Musharax Cali xaaji ayaa dadweynaha Garoowe ee sida wayn u soo dhoweeyey waxaa uu kula hadlay hoyga uu ka degan yahay Garoowe, isagoo xusay in Puntland ay xilligan u baahan tahay is bedel isla markaasna uu awooddo in uu wax badan qabto.
Cali Xaaji Warsame ayaa ku biiraya dhowr murashax oo fara ku tiris ah oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland wakhtigan la joogo, musharaxa ayaa wakhti dheer ku qaatay gobollada Bari, Sanaag iyo Karkaar oo uu kulamo kula yeeshay qaybaha bulshada.
Dhegeyso:- Murashax Cali Xaaji Warsame oo dadweynaha kula Garoowe kadib soo dhowayn loo sameeyey